Bvisa zvakapetwa zvinofambidzana ne Smart Merge Pro, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Bvisa zvakapetwa zvinofambidzana ne Smart Merge Pro, yemahara kwenguva pfupi
Vashandisi vanowanzo chengeta nhamba hombe yenhamba dzenhare uye kero pane yedu iPhone vanowanzoisa njodzi yekudzokorora zvakafanana kusangana pane inopfuura kamwe chiitiko. Asi zvakare kana tikabatanidza zvishandiso zvedu neakaundi yedu yeFacebook kana chero imwe mhando yekushandisa ine vanofambidzana, isu tinogona zvakare kutambura dambudziko iri. Iwo manejimendi eedu mazita ekutaurirana kwagara kuri dambudziko rakaoma kugadzirisa, nekuti kana tangoita shanduko, kunyanya kana iri nenzira yakakura, zvakaoma kwazvo kana zvisingaite kuzvidzorera, izvo zvinotimanikidza kuti tibate nekubata nekutarisa kana vakadzokororwa, iine data rinobatsira uye rinongochengeta zita racho pasina ruzivo.
Asi isu tinogona kusarudza chechitatu-bato kunyorera iyo inotibatsira isu kugadzirisa edu ajenda, kutsvaga zvakapetwa zvinofambidzana, mazita mune ajenda isina kana data mukati ... MuApp Store tinogona kuwana akawanda mafomu anotibvumidza kuti tiite aya mashandiro ekuita, asi zvese , panguva imwechete zvishoma pane izvo zvakakodzera kubhadhara. Iyo Smart Merge Pro kunyorera ndeimwe yacho. Smart Merge Pro ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye3,99 euros asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikanda zvachose mahara.
Kufanana nemaapplication ese anotibvumidza isu kudzora kudzokorora kana zvisine chinhu mukati medu vatinoshamwaridzana navo, Smart Merge Pro inotipa zvakasiyana mu-app zvekutenga kuchengetedza kopi yeedu ajenda, chimwe chinhu icho Tichazvida pasina nguva, nekuti isu tinogara tiine iyo iCloud kopi, Chero bedzi isu tichiishandisa.
Iko kunyorera, kana kuchinge kwaongorora yedu yese ajenda, kuchatipa ruzivo kuitira kuti ngatibatanidzei mazita, kunyanya idzo dzakadzokororwa, zvichibva pazita uye nedhata iyo inogona kuve neyese. Izvo zvakare zvinotipawo runyorwa rwevanofambidzana pasina chero ruzivo mukati. Zviri nyore kwazvo kuongorora mhedzisiro yese iyo yaanotipa usati waita izvi, nekuti pane imwe nguva zvinogona kunge zvisiri izvo uye kudzima kana kusanganisa wekubata uyo wausingafanire.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Bvisa zvakapetwa zvinofambidzana ne Smart Merge Pro, yemahara kwenguva pfupi
Apple Music inobhadhara zvinyorwa kupfuura Spotify
Yakanyanya kujeka 3D Kubata uye kumeso kumeso kune inotevera iPhone 8